Faah faahin kasoo baxaysa dagaal ciidanka Soomaaliland iyo kuwa Khaatumo ku dhexmaray g/Sool. – Radio Daljir
Faah faahin kasoo baxaysa dagaal ciidanka Soomaaliland iyo kuwa Khaatumo ku dhexmaray g/Sool.
Janaayo 19, 2013 11:12 b 0
Iska hor imaadka oo aan la ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay ayaa qaar ka tirsan dadka deegaanka waxay Radio Daljir ?u sheegeen in saddex kamid ah ciidanka Soomalailand lagu dilay weerarkaas, inkastoo dadkaasi ay ahaayeen dhanka maamulka Khaatumo, Iyadoo ?la isku adeegsaday rasaasta ka dhacda qoryaha culus iyo kuwa fudud, sida ay dadka deegaanku noo sheegeen.
Axmed Cali Faarax oo ah Wariye madax bannaan kuna sugan deegaanka xudun ayaa Radio Daljir U xaqiijiyey in iska hor imaadkaas uu jiro, in kastoo uusan sheegin tirada rasmiga ah ee dagaalkaas ku waxyeelowdey.
Mas?uuliyiinta maamulada Somaliland iyo Khaatumo weli kama aanay hadlin iska hor imaadka balse waxaa jira xiisado todobaadyadii ugu dambeeyey ka taagnaa deegaano katirsan gobolka Sool.
Somaliland oo ka hadashay siyaasadda cusub ee Maraykanka ee ku wajahan Soomaaliya, iyo joojintiisa la taacaamulidda maamullada maxalliga ah.
Dawladda Soomaaliya oo 160 askari Dhuusomarreeb uga furmay tababar muddo 7 cisho ah markii ugu horaysay.